Food Bag factory na China, Ou akpa, Akwụkwọ Bag, biodegradable akpa - Beyin mbukota
Beyin mbukota bụ ọkachamara nkwakọ bag emeputa, anyị ipuiche emebe na-amị akpa kọfị, afọ akpa, tii akpa, nri akpa, akụ akpa, Fikiere mkpụrụ akpa, ọka akpa, Pita nri akpa, ntụ ntụ akpa, ihendori akpa, agụụ akpa, retort akpa, friza akpa, spout akpa, akwụkwọ akpa, film mpịakọta, wdg, biodegradable akpa bụkwa avaliable.
AKW CKWỌ CANNABIS
Nha akpa dị iche iche site na 0.5g ruo 1lb. E nwere ọtụtụ njikere ụgbọ mmiri ụdị, dị ka kuki, runtz, oké ọhịa boy, skittle, agbamakwụkwọ achicha, newds eriri, acha anụnụ anụnụ nrọ, wdg Ọzọkwa anyị nwere ike ime ọtụtụ ụdị nke ụmụaka na-eguzogide akpa, dị ka tuo N slid akpa, abụọ mkpọchi uwe akpa, mmịfe mkpọchi uwe akpa, wdg Bịa maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe njikere ụgbọ mmiri akpa na omenala akpa!
AKW COKWỌ COFFEE
Coffee akpa bụ ewu ewu na gburugburu ụwa, ejikari nwere ike ịbụ ewepụghị akpa, ebili akpa, n'akụkụ gusset akpa na ewepụghị ike akpa. Maka ihe onwunwe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa niile na-ahọrọ foil dị n'ime, mana ụfọdụ dị ka Matt gwuchaa ụfọdụ dị ka kenkowaputa. N'ihi na valvụ, ma ọ bụrụ na gị na ngwaahịa bụ kọfị agwa, mgbe ahụ, ị ​​ga-mkpa otu ụzọ valvụ ka ikuku si, mgbe ma ọ bụrụ na gị ngwaahịa bụ kọfị ntụ ntụ, nomally dịghị mkpa maka valvụ.
A na-eji kraft pulp mee Kraft akwụkwọ, ọ na-abụkarị aja aja, ude ma ọ bụ agba ọcha. Ọ na-agbanwe ma dị ike, nwere nguzogide dị elu, nwere ike iguzogide esemokwu na nrụgide ka ukwuu, bụ ezigbo ihe maka nkwakọ ngwaahịa. Na mgbakwunye, n’ihi na akwụkwọ kraft na-eme ka ihe dị mma na gburugburu ebe obibi na mmagharịgharị, ma dịkwa mma, ọ na - ewu ewu ma na - akwalite ya ugbu a
NTOUR BA AKG
Spout akpa ọtụtụ-eji maka ọveraụveraụ, sauces, na nri ụmụaka, wdg E nwere ọtụtụ nha maka spout akpa, dị ka 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml, wdg Nwere ike ịbụ n'elu-emeghe, top spout ma ọ bụ akụkụ spout, spout na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-eguzogide nwa maka nri nwa, ọ dịghị zipa, zipa nkịtị ma ọ bụ zipa abụọ.
Kazuo Beyin Akwụkwọ na Plastic Packing Co., Ltd. onye bu ya ụzọ bụ Xiongxian Juren Paper na Plastic Packing Co., Ltd, hibere na 1998 na mbido. enterprise nke bụ ọkachamara na-emepe emepe na-amị mgbanwe plastic nkwakọ akpa. Ike imepụta nwere ike iru 60million RMB kwa afọ; Ejirila ulo oru ulo oru 50 wuru ulo oru ndi ozo nke 50. E nwere ihe karịrị ndị ọrụ 100 na-arụ ọrụ na Beyin, 50 n'ime ha bụ ndị ọkachamara ọkachamara ruru eru na asambodo akwụkwọ obibi akwụkwọ, ndị ọkachamara 10 na-ewerela ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa maka afọ 10. Ndị ọrụ nwere akụ na ụba nwere afọ ojuju na-achọ ihe ndị ahịa chọrọ.
Beyin na-akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ ha ka ha mee nyocha nucleic acid
Beyin na-akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ ha ka ha mee nyocha acidic ugbu a, ọnọdụ nke ọrịa na njikwa ọrịa na mpaghara anyị siri ike, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ime nucleic acid na ego ha ...
Olee otú ikpebi gị mgbanwe nkwakọ akpa size?
Olee otú ikpebi gị mgbanwe nri nkwakọ bag size? N'ịbụ onye nọ na ụlọ nkwakọ ngwaahịa ọtụtụ afọ, Ajuju a na-ajụkarị bụ otu esi ekpebi nha akpa m? Nkwakọ ngwaahịa bụ ihe dị mkpa maka ngwaahịa ọ bụla, ọbụlagodi im ...
Girl ọkacha mmasị Christmas snacks onyinye n'ezie gbanwere nkwakọ！
Girl ọkacha mmasị Christmas snacks onyinye n'ezie dị gbanwere nkwakọ！ Christmas na-abịa n'oge na-adịghị. Nke a abughi nani ubochi nke na-eto obibia nke afo ohuru, kamakwa ubochi obula onye obula n’enye ibe ya onyinye ma gosiputa ezi uche ...